पुजाको कर्तुत सबै बाहिरियो, ६ महिनाको बच्चा फालेर गइ पुजा – Hamrosandesh.com
पुजाको कर्तुत सबै बाहिरियो, ६ महिनाको बच्चा फालेर गइ पुजा
काठमाडौं, मंसिर १८ ।
६७ बर्षे वृद्ध संग बिहे गरेर चर्चामा आएकी २१ बर्षे पुजाको पाँच बर्षका छोरा र पुजाकी पुर्वसासु मिडियामा आएका छन । सानैमा छाडेर गएकी पुजाको छोरोको ६ महिनाको हुदादेखी पालेकी पुजाकी पुर्वसासु आमाले पुजाको नालीबेली बताएकी छिन । पुजाले सानै उमेरमा आफ्ना छोरासग भागेर बिबाह गरेकी र एक बर्षपछि छोरो जन्मियो । केही समय पछि पुजाले घर छाडेर हिडेपछी त्यसको केही दिन नबित्दै पुजाका पुर्व श्रीमान अर्थात आफ्ना छोराले पनि घर छाडेर हिडेको उनले बताइन ।
भावुक हुँदै पुजाकि पुर्व सासुले आफुले गरेका दुख पीडा अनि छोराले छाडेर गएपछी बेपत्ता भएको र अहिलेसम्म कतैबाट सम्पर्क पनि नगरेको सुनाइन । पुजाले पहिल्यैबाट आफुले धनी केटासँग बिहे गर्ने बताउदै हिड्ने गरेको कुरा पनि उनले खुलाइन । पुजाले सानैमा छोडेर गएको छोरालाई स्याहार गर्दै गरेकी उनले छ महिनाको बच्चालाई अहिले पाँच बर्षको बनाइन ।
धेरै कुरा बुझ्ने अनि ठूलो मान्छेको जस्तो व्यबहार गर्ने ती बच्चाको बानी देख्दा आफू पनि छक्क पर्ने बताउछिन । पुजा अथवा उनका श्रीमानले उनिहरुको बच्चा लैजाने कुरा गर्दा उनले भावुक हुँदै “आफुले छ महिनाको हुदादेखी हुर्काएको मेरो छोरोलाई अब म कसरी दिन सक्छु बरु म:र्न तयार छु तर बाबुलाई कसैलाई दिन्न । सानो हुदा फालेर हिडेका उनीहरुलाई अहिले म कुनै हालतमा दिन्न ” भन्दै आखाभरी आशु बनाइन ।
पुजाले अहिले ६७ बर्से वृद्धसंग बिहे गरेको कुरा बारे उनले भनिन “धनी मान्छे भेटेर गइ होला । उसको जीवन सधै खुशीसाथ बितोस । मैले छ महिनाको बच्चालाई छोरा कति दुख गरेर हुर्काए अब त म म:र्छु बरु तर छोरा दिन्न । जस्तोसुकै मुद्दा लड्न जे गर्न नि तयार छु । मेरो मुटुको टुक्रा म बाट नछुटाउन पनि उनले आग्रह गरिन । भावुक हुँदै उनले सुरुदेखि अहिलेसम्म पुजाले गरेका सम्पुर्ण कुराहरू यसरी बताइन ।
बालक छोरा पढाउने गुरुलाई लेखेको यो चिठीले विश्वका अर्बौ मानिस स्तब्ध बने !
एजेन्सी– राजनीतिक क्षेत्रमा व्यस्त हुने राजनीतिज्ञहरु प्रायजसो घरव्यवहारमा समय दिन नसक्ने खालमा हुन्छन् । सँधैजसो राजनीतिक र सामाजिक क्रियाकलापमा व्यस्त हुँदा आफ्नो परिवार र बालबच्चाहरुको हेरचाह अन्य अभिभावकको थाप्लोमा परेका समस्याहरु प्रसस्त पाइन्छन् तर विश्व राजनीतिक रंगमञ्चका चर्चित केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले भने आफ्नो परिवारका लागि निकै चिन्ता लिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै,राजनीतिज्ञहरुमध्ये अमेरिका पूर्वराष्ट्रपति अब्रहाम लिंकन पर्दछन्, जसले आफ्नो छोरो पढ्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई दिव्य उपदेशका शैलीमा एउटा महत्वपूर्ण चिठी लेखेका थिए,
‘मेरो छोरोले के सिकोस भन्ने शीर्षक’ मा उक्त चिठी विश्वका अभिभावकहरुका लागि सँधै प्रेरणाको श्रोत बनिरह्यो । प्रस्तुत छ, आफ्नो बालक छोरो पढ्ने विद्यालयका गुरु (प्रधानाध्यापक)लाई लिंकनले लेख्नुभएको चिठीको पूर्ण विवरण :
मेरो छोरोले के सिकोस ?
श्रीमान प्रधानाध्यापक ज्यू, मेरो छोरोले सबै मानिस एकै किसिमका हुँदैनन् भन्ने कुरा सिकोस् । समाजमा दुष्ट मानिस छन् र सज्जन पनि छन्, स्वार्थी राजनीतिज्ञ पनि छन् भने समर्पित निष्ठावान नेता पनि छन् ।
त्यस्तै शत्रु पनि छन् अनि मित्र पनि छन् । यो कुरा बुझाउन त समय लाग्ला नै । तैपनि उसलाई परिश्रम गरी कमाएको एक डलर सित्तैमा पाएको पाँच डलरभन्दा बढी मूल्यवान हुन्छ भन्ने कुरा बताइदिनुहोस् । उसले विजय र पराजय भनेको के हो, राम्ररी बुझोस् । त्यस्तै, इष्र्याले युक्त भएको हाँसोको भित्री मर्म बुझोस् । उसलाई आकाशमा उडिरहेका चराहरु, रमाइलो दिनमा भुन्भुनाइरहेका माहुरीहरु र पहाडी काखमा फुलेका फुलहरुको शाश्वत रहस्य बुझ्न केही समय दिनुहोस् ।
मेरो छोरो जतातिर हुल छ, त्यतैतिर लाग्ने प्रवृत्तिको नहोस् । सुनेको कुरालाई राम्ररी छु्ट्याउन सक्ने होओस् । दुःख र कष्टमय अवस्थामा पनि प्रफुल्ल रहन सक्ने होओस् । उसलाई कहिले काँही आँखाबाट आँसु झार्नु लाजमर्दो कुरा होइन भनिदिनुहोस् । ऊ आफ्नो बाहुबल बुद्धि र सामथ्र्यमा विश्वास गरोस् । यदि उद्धेश्य उपयुक्त र सही छ भने जस्तोसुकै विरोध भएपनि जीउज्यानले लागिपरोस् । उभित्र सत्य र न्यायका लागि संघर्ष गर्न साहास र दृढशक्तिको विकास गरिदिनुहोस् ।
ऊसँग नम्र व्यवहार त गर्नुहोस् तर उसले टाउकामा टेक्ने गरी चाहिँ होइन । सम्झनुहोस्, आगाको लप्काबाटै फलाम खारिन्छ । ऊभित्र साहास र सँधै केही गरौं भन्ने भावना भइरहोस् । मेरो छोरो स्वयंम निर्भीक, साहसी र उत्साही बन्न प्रेरित भइरहोस् अनि मात्र ऊ मानवताप्रति नरम र आस्थावान हुन सक्छ ।
यूरोप छिर्न खोज्‍ने अफ्रिकीहरु चढेको डुंगा दुर्घटना हुँदा १४० को मृत्यु
सेनेगल, १४ कार्तिक । अफ्रिकी देश सेनेगलको समुद्री तटीय क्षेत्रमा २ सय मानिस बोकेको...
काेराेनाकाे संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने भन्दै देशभर कडा लकडाउनकाे घोषणा